कोरोना संक्रमित संख्या १ करोड नजिक निको हुने संख्या पनि बढ्दै –
अजोड इन्सुरेन्सको आइपीओमा जानौ कति पर्यो आवेदन
साधना लघुवित्तको आईपीओ बाँडफाँट ६६ हजार १५२ जनालाई १० कित्ता
१७ बर्षिया किशोरले रित्याइदिए बाउआमाको २७ लाख रुपैयाँ
हिजो स्वीकृति साढे ३९ करोड बराबरको आईपीओ विक्रीमा आउदै हातपार्ने हैनत
आइएमई इन्स्योरेन्सले आईपीओ विक्रीका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन
NamasteKhabar isatop-rated online news information portal that delivers information about braking news, stocks market, health, science, etc
कोरोना संक्रमित संख्या १ करोड नजिक निको हुने संख्या पनि बढ्दै
June 27, 2020 June 27, 2020 Namastekhabar0Comments
कोरोना संक्रमित संख्या १ करोड नजिक निको हुने संख्या पनि बढ्दै: विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या ९९ लाख ६ हजार ७५६ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा १ लाख ९२ हजार नयाँ संक्रमित थप भएका छन् । यस्तै, ५३ लाख ५७ हजार भन्दा धेरै उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् । हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या ४ लाख ९६ हजार ९१५ पुगेको छ ।
अमेरिकामा कोरोना भाइरसबाट हालसम्म १ लाख २७ हजार ६४० जनाको मृत्यु भएको छ । त्यहाँ संक्रमितको संख्या २५ लाख ५२ हजार ९५६ पुगेको छ । अमेरिकामा १० लाख ६८ हजार ७०३ जना उपचार गरेर डिस्चार्ज भएका छन् । भारतमा पनि संक्रमणको दर उच्च रुपमा बढिरहेको छ । पछिल्लोे २४ घण्टामा मात्रै यहाँ १८ हजार नयाँ संक्रमित थप भएका छन् । योसँगै भारतामा हालसम्म ५ लाख ९ हजार संक्रमित हुँदा १५ हजार ६८९ जनाको मृत्यु भएको छ । बेलायतमा हालसम्म ४३ हजार ४१४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३ लाख ९ हजार ३६० जना संक्रमित रहेका छन् ।
चीनमा पछिल्लो २४ घण्टामा २१ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । त्यहाँ हालसम्म ८३ हजार ४८३ जना संक्रमित हुँदा मृतकको संख्या ४ हजार ६३४ छ । जापानमा १८ हजार १९७ जना संक्रमित हुँदा ९६९ जनाको ज्यान गएको छ । नेपालमा भने अहिलेसम्म ११ हजार ७५५ जना संक्रमति फेला पर्दा २ हजार ६९८ जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् । २७ जनाको भने मृत्यु भएको छ ।
ब्राजिलमा पछिल्लो २४ घण्टामा ४० हजारभन्दा धेरै संक्रमित फेला पर्दा करिब १ हजार जनको मृत्यु भएको छ । योसँगै ब्राजिलमा हालसम्म १२ लाख ८० हजार ५४ जना संक्रमित हुँदा ५६ हजार १०९ जनाको मृत्यु भएको छ । रुसमा ६ लाख २० हजार ७९४ संक्रमित हुँदा ८ हजार ७८१ जनाको मृत्यु भएको छ पाकिस्तानमा १ लाख ९५ हजार ७४५ संक्रमित हुँदा ३ हजार ९६२ जनाको ज्यान गएको छ । जर्मनीमा १ लाख ९४ हजार ३९९ जना संक्रमित हुँदा ९ हजार २६ जनाको मृत्यु भएको छ । टर्कीमा १ लाख ९४ हजार ५११ संक्रमित हुँदा ५ हजार ६५ को ज्यान गएको छ । फ्रान्समा संक्रमित १ लाख ६२ हजार ९३६ हुँदा २९ हजार ७७८ जनाको मृत्यु भएको छ । बंगलादेशमा हालसम्म १ लाख ३० हजार ४७४ संक्रमित हुँदा १ हजार ६६१ को मृत्यु भएको छ ।
स्पेनमा संक्रमितको संख्या २ लाख ९४ हजार ९८५ पुगेको छ भने २८ हजार ३३८ जनाको मृत्यु भएको छ । पेरुमा २ लाख ७२ हजार ३६४ जना संक्रमित हुँदा ८ हजार ९३९ जनाको मृत्यु भएको छ । चिलीमा २ लाख ६३ हजार ३६० संक्रमित हुँदा ५ हजार ५८ जनाको मृत्यु भएको छ । यता, इटालीमा संक्रमितको संख्या २ लाख ३९ हजार ९६१ पुग्दा ३४ हजार ७०८ जनाको मृत्यु भएको छ । इरानमा २ लाख १७ हजार ७२४ जना संक्रमित हँदा १० हजार २३९ जनाको मृत्यु भएको छ । मेक्सिकोमा २ लाख ८ हजार ३९२ जना संक्रमित हुँदा २५ हजार ७७९ को मृत्यु भएको छ ।
← पुँजी बजारबाट लगानीकर्ता र व्यापारीलाई छुट्याउने
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रबन्धक किर्ते गरी ऋण प्रवाह गरेकोमा पक्राउ →
Namaste Khabar isatop-rated online news information portal that delivers information about braking news, stock market, health, science, etc.
प्रतिनिधि सभामा सांसदहरुको सिमाअतिक्रमणबारे जानौ के छ त भनाई
May 10, 2020 May 10, 2020 Namastekhabar 0
आइतबार बिहानै थप १० जनामा कोरोना पुष्टी संक्रमित संख्या २९१ पुग्यो
May 17, 2020 May 17, 2020 Namastekhabar 0
भारतका उम्दा अभिनेता इरफान खानको ५४ वर्षकै उमेरमा मृत्यु
April 29, 2020 April 29, 2020 Namastekhabar 0
Copyright © 2020 Namaste Khabar. All rights reserved.